यो लाग््छ कि सबै केटीहरु को मान्छे संग कैसे छेड़छाड़ को लागि जान्छ, तर केहि यो कसरि गर्न को लागि सीखना चाहते हो। व्याख्या गर्नुहोस् कि विपरीत सेक्स प्रतिनिधिहरु को छेड़छाड को प्रतिक्रिया को रूप मा उनि चाहन सक्दैन। मानिससँग सहीसँग कसरी इज्जत गर्न सिक्नदेखि, के यो निर्दोष गेमले कुनै खास तरिकाले विशेष तरिकामा सुरू गर्न सक्छ? वास्तवमा, कुनै पनि स्पष्ट सिफारिसहरू दिन सक्दैनन् - सबै मानिसहरू फरक छन्, र त्यसैले हाम्रो तरिकामा फरक प्रतिक्रियाहरू। र कुनै पनि अनुकरण नगर्नुहोस्, किनकी हरेक महिला वास्तविकतामा उसको व्यक्तित्वमा चासो राख्छ, जसले चिन्ताकारी टिकटहरू चाहिन्छ? तर, यसको बावजूद, त्यहाँ धेरै चालहरू छन् कि कहिलेकाहीँ महिलाहरु लाई मान्छे को उनको मानेको संकेत को संकेत दिन को लागि मदद गर्दछ।
केटाहरूसँग कसरी इज्जत गर्न सिक्ने हो?
यो माथि नै पहिले नै भनिएको छ कि छेउमा एउटा खेल हो जुन जरूरी बिस्तारै अन्त्य गर्दैन, यो सबैले निर्भर गर्दछ कि तपाई आफैंको लागि निर्धारित लक्ष्यमा। र एक व्यक्ति संग इश्कबाज गर्न को लागी, तपाईं यस डीउल विचारबाट के चाहानुहुन्छ स्पष्ट रूपमा निर्धारित गर्न आवश्यक छ - सेक्स वा तपाईं केवल समय खर्च गर्न छेउमा पर्दछ, सकारात्मक भावनाहरु (विपरीत सेक्स को रुचि चॉकलेट भन्दा राम्रो काम गर्दछ), आदि। अनि लक्ष्य निर्धारण गर्न, हामी तदनुसार कार्य गर्दछौं। यदि तपाइँ क्षितिजमा छाड्न चाहनुहुन्न भने, स्पष्ट यौन संकेतहरू चाहिँदैन, यो पर्याप्त मात्र सजिलो हुनेछ।
हामी सबै जान्दछन् कि डेटिङ सुरू गर्ने केटी अचम्म छ। यद्यपि आधुनिक महिलाहरू जसले उनीहरूका स्वतन्त्रतालाई जोड दिन चाहँदैनन् अब जीवनको सबै क्षेत्रमा पहल देखाउने शर्मिला छैनन्, यो अझै पनि यो गर्न लायक छैन, छेउमा सुरू गर्न। अन्यथा, तपाईं आफैलाई एक रोचक खेलबाट बेवास्ता गर्ने जोखिम चलाउनुहुन्छ, त्यसैले चाँडो नगर्नुहोस्। त्यसोभए तपाई के मान्छेलाई चासो देखाउन के गर्न चाहनुहुन्छ? यो सजिलो छ - तपाईलाई वास्तवमा यस व्यक्तिमा चासो लिन र पूर्ण रूपमा मुक्त हुनु आवश्यक छ - तपाईंको व्यवहारले तपाईलाई सबै कुरा बताउनेछ - इशाराहरु को भाषामा उनीहरुलाई सबै कुरा भन्न को लागी थाहा छ, भले पनि उनि यसको बारेमा थाहा छैन। तपाईलाई आवश्यक छ एक मनपर्ने विचारहरू (कुनै पनि अवस्थामा यो तपाईंको आँखामा वस्तुको सावधान ड्रिलिङ छैन, जस्तै उसले तपाईंलाई पैसा तिर्छ), एक ईमानदार मुस्कान, एक आरामको मुद्रा। सबै पछि, तपाईं कुनै पनि मामला छेड़छाड़ देखि प्रसन्न गर्न चाहन्छु, त्यसमा धुन र पहिले नै यसको पहिलो मिनेटबाट खेलको आनन्द लिनुहोस्।
खैर, यहाँ एक लामो छ, सामान्य जस्तो भन्दा भन्दा बढी, आकर्षक वस्तुको दिशामा तैनाती निकाय यसको प्रभाव थियो, र यस बहस - कुराकानी को एक समान रूप देखि कठिन भाग आउछ। के भन्नु हुन्छ यति महत्त्वपूर्ण छैन, मुख्य कुरा यो तपाइँ कसरी गर्नुहुनेछ। मुख्य नियम - कम भन्नुहोस्, अधिक सुन्नुहोस्। पुरुषहरूले आफ्नो बुद्धिको साथमा विजय हासिल गर्न मन पराउँछन्, त्यसैले किन उनीहरूलाई यो अवसर दिन सक्दैनन्? र सबै टिप्पणीहरू तपाईलाई रिहाई दिइनेछ तपाईंले व्यभिचारिक, कठोर, तपाईंको ईश्वरीय चासो नहुनु हुँदैन, कुराकानीको समर्थन गर्न तपाइँको चाहना महत्वपूर्ण छ। र कडा विवादका साथ संवाददातालाई डरलाग्दो छ, तपाईं अगाडी खेल खेल छोड्ने खतरा चलाउनुहुन्छ। यदि कुराकानीमा पज आयो भने, त्यसोभए संचार जारी राख्न एक राम्रो तरिका हो, मानिसको प्रशंसा हुनेछ। यो मानिस हो, उहाँको उपस्थिति छैन। उदाहरणका लागि, तपाईं आफ्ना लुगाहरू प्रशंसा गर्न चाहनुहुन्थ्यो (सहायक), के गर्ने? भन्न को लागी रोचक (सुन्दर, मौलिक) तपाईंले आफ्नो टाई (फोन, मिठाई, आदि) छनौट गर्नुभयो। यही छ, यो कुरा कुरा नगर्ने आवश्यक छ, तर एक व्यक्तिलाई यसलाई छनौट गर्ने क्षमता। अनि निस्सन्देह, कुराकानीको दौरान लाइट टचको स्वागत गरिन्छ। फेरि कुराकानीमा उनीहरूको चासोलाई जोड दिन।
कसरी मानिसको साथ इज्जत गर्न सिक्नु हुन्छ? यो मलाई थाहा छ कि के गर्नु पर्छ, म तदनुसार काम गर्दछ, तर अझै पनि काम गर्दैन। परिचित अवस्था? कारण अपर्याप्त मुक्तता, आत्म-विश्वास वा एक पूर्वाधार उपस्थिति हुन सक्छ। मानिस को लागी केवल तपाईं मा रोकियो, आफ्नो आंकडाको सम्मान जोड र प्रदर्शन गर्न संकोच नगर्नुहोस्। बस धेरै फ्राङ्किक कपडाहरू साथ नपुगेको छैन, उनीहरूले मानिसलाई टाढा पुर्याउनेछन्, वा तपाईंलाई एक महिलाको रूपमा बुझ्न पाउनेछ जुन धेरै अचम्म छ।
दुई केटाहरू कसरी छनौट गर्ने?
क्रिसमसको रूख कसरी सजावट गर्ने?
दिमागको लागि खेलहरू
संचारको प्रक्रियाको रूपमा खेल
35 मुहरहरू र अन्य प्यारा चम्किलो जनावरहरू
गर्भावस्थाको समयमा ब्लिडिङ
संसारमा सबैभन्दा ठूलो बिरालो
नींबू आवश्यक तेल - गुण र अनुप्रयोग
एक बिरालोमा उल्काउने कारण
गर्भावस्थामा नकारात्मक Rh rhesus
अमल क्लोनीले अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस कसरी सञ्चालन गरे?
माइकल फौलर केन्द्र
फैशनेबल पतलून - गर्मी 2016
एक कठिन वित्तीय अवस्थामा अभिनेता जुद कानुनी ... उनीहरूको छोराछोरीको कारण